Home News Francisco Madeira oo Madaxda Dowlada u Shegay In Soomaaliya Aysan heysan Ciidan...
Francisco Madeira oo Madaxda Dowlada u Shegay In Soomaaliya Aysan heysan Ciidan Sugi Kara Amanka
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madeira, ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya aysan ku filneyn amniga Dalka Soomaaliya isaga oo sheegay in loo baahanyahay in AMISOM ay sii joogto dalka.
Francisco Madeira,waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jirto Baahida Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya,isaga oo xusay in ilaa 2021ka AMISOM ay sii joogi doonto Soomaaliya.
Mr Madeira, ayaa yiri “heerka ay gaarsiisan tahay qatarta Al-shabaab,hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya,lagama maarmo ciidamada lebbisan,haddii la isku dayo in howlgalka la gaba gabeeyana,waxaa ay u badan tahay in qatar ka weyn la galo.
Francisco Madeira,ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in Dowladda iyo AMISOM ay uga dambeeyaan howlaha amniga iyo siyaasadda sidoo kalena la shaqeeyaan si loo gaaro ujeedada laga leeyahay howlgalka sida uu hadalka u dhigay.
AMISOM hadda waxaa ay ku jirtaa fulinta qaraarkii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ee soo baxay Bishii August ee sanadkii 2017kii,kaas oo farayay in Ciidamada AMISOM ay billaabaan bixitaankooda inta aysan dhamaan December 2017,iyada oo isla xilligaas loo qabtay 1,000 Askari oo ka tirsan AMISOM ay ka baxeen Soomaaliya.
Sidoo kale 31ka Bisha May ee soo socota ayuu qorshuhu yahay in 1,000 Askari oo ka mid ah AMISOM ay ka baxaan dalka iyada oo ilaa 2020ka si tartiib tartiib ah ay u baxayaan Ciidamada dowladda Soomaaliyana lagu wareejinayo amniga dalka.